Loko simenitra, tsipika plastika, marbra, fitaratra, fandikana maro amin'ny fomba maoderina! - Faucets an-dakozia tsara indrindra 2021 | Faucets efitra fandroana tsara indrindra | WOWOW Faucets
Home / Interior design / Loko simenitra, andalana plastika, marbra, vera, fandikana maro amin'ny fomba maoderina!
2021 / 05 / 29 FisokajianaInterior design 6227 0
Fandikana marobe amin'ny fomba maoderina
Ny fomba maoderina, ny tena ifantohan'ny rivo-piainana milamina sy mirindra. Ny fahatsapana tsipika tsotra sy maranitra, mizana habaka marim-pototra, foto-kevitra momba ny endrika maoderina, miaraka amin'ny fandaminana ny filaminana maoderina. Inona no tena misolo tena ny fomba maoderina amin'ny resaka fitaovana?
Ireo mpamorona roa amin'ny HD-m2 Studio dia manana traikefa 12 taona amin'ny famolavolana anatiny. Hainy tsara ny mampiasa fitaovana isan-karazany hanehoana ny hatsarany. Ny loko simenitra, ny tsipika plaster, ny marbra ary ny vera dia aingam-panahy ho azy ireo avokoa. Amin'ity indray mitoraka ity dia tranga efatra no nandika ny fomba maoderina misy fitaovana efatra samy hafa izay samy manana ny mampiavaka azy.
Ny hatsaran-tarehy voajanahary amin'ny loko simenitra
Ny faritra iraisan'ity tranga ity dia mampiasa fitaovana miloko mitovy amin'ny iray manontolo. Ny loko simenitra, ny hazo ary ny volondavenona vita amin'ny lamba volondavenona dia mifandona hamoronana fahatsapana ara-pahitana samihafa. Momba ny loko simenitra, kitiho eto raha hianaranao: Inona ny loko simenitra?
Ny hazavan'ny andriamby amin'ny rindrina dia manasongadina ny haingon'ity tranga ity. Sady haingo no singa ilaina amin'ny jiro eo an-toerana. Momba ny jiro mitsoka magnetika, kitiho eto raha hianaranao: Inona no atao hoe jiro suction magnetika?
Ny sehatry ny fisakafoana sy ny lakozia dia manana asa maro mahandro, sakafo sy fitahirizana. Ny fitaovana vato sy ny loko simenitra dia manana fahatsapana voajanahary, nanako ny lohahevitra ary nifangaro tao amin'ny habakabaka.
Ny rindrina amin'ny lafiny roa amin'ny lalantsara dia miharo amin'ny varavarana. Ny làlan-jiro manjelatra malama dia miitatra hatrany amin'ny fidirana, manampy dynamism amin'ny toerana ety sy maizina.
Ny atin'ny efitranon'ireo ankizy dia tsy mampiasa loko hanasongadinana ny maha-zaza, ary ny vy sy ny fotsy fotsy dia mamoha sary an-tsaina kokoa ny habaka.
Ny feo mainty sy fotsy madio sy madio ao amin'ny trano fidiovana dia mampiseho ny kanto amin'ny fomba maoderina. Ny taila amin'ny endrika grille dia vita miolaka, manome ny efitra fandroana mihidy fahatsapana mamelatra ny haavon'ny gorodona.
Ny hatsaran'ny tsipika gesso mahafinaritra sy voafehy
Raha resaka tsipika gesso dia misy famaritana stereotazy foana, toa tsy afaka maneho ny fomba eropeana na amerikanina fotsiny. Na izany aza, amin'ny fomba maoderina, dia fomba fiteny sy fomba kanto ihany koa izy io.
Ny habaka iray manontolo dia nandao ny volavola sarotra, miaraka amin'ireo singa tsipika mahitsy, ary avy eo amin'ny tsipika malefaka amin'ny fanaka lamba sy kojakoja vita amin'ny lamba, izay mampandeha tsara ny atmosfera mahazatra.
Eo amin'ny rindrina fotsy fotsy lehibe, ny tsipika fizarazarana volamena hita maso dia miaraka amina vera mainty. Ny sary manjavozavo dia mampitombo ny fahatsapana hierarchy habakabaka, ary miharihary ny faharanitan-tsaina amin'ny famolavolana.
Ny trano fisakafoanana dia mampiditra hazavana voajanahary be dia be, izay mampanan-karena ny firafitry ny habaka anatiny. Ny lokon'ny jiro sy ny aloky ny fitaovana dia averina am-peo malefaka.
Ny firafitry ny toerana malalaka ao amin'ny efitrano fandriana dia mahatonga ny traikefa hahafinaritra kokoa, ary ny fiovan'ny hazavana sy ny aloka dia mamorona fahatsapana habaka izay ahitan'ny zava-misy ny zava-misy, izay mahaliana tokoa.
Ny rindrina fotsy tafiditra ao anaty latabatra fanaovana akanjo vita amin'ny hazo dia mahatonga ny toerana ho mavitrika sy malefaka kokoa, ary ny loko hazo kanto eo amin'ny habakabaka dia ahafahan'ny olona mirenireny amin'ny atmosfera voajanahary ary miala sasatra.
Ny mavokely mavokely sy ny loko hazo tany am-boalohany dia mamaritra ny drafitra mamy sy malefaka ao amin'ny efitranon'ny ankizy, ary ny firafitra manan-tsaina dia mamoaka toerana bebe kokoa ho an'ny ankizy hilalao.
Ilay jiro tsara tarehy, maivana sy ahazoana aina, dia manazava ny haben'ny efitrano fandriana. Ny seza mihantona wicker manoloana ny varavarankely dia manokatra toerana mahafinaritra.
Ny taila mosaic hexagonal ao amin'ny trano fandroana dia feno fahalianana. Ny antsipirian'ny famolavolana natao tamim-pitandremana sy ny loko mahaliana dia mamerina amin'ny laoniny ny fampiononana ny habaka.
Kanto mirehareha sy tsara tarehy
Rehefa mijery ianao, dia hitanao fa ny marbra dia ampiasaina ho fitaovana fandokoana ny habaka amin'ny toerana maro amin'ity tranga ity. Ny sofa tsy ara-dalàna dia mamorona arc eo amin'ny habakabaka, manavaka faritra roa. Ny fitambarana hazavana voajanahary sy jiro voajanahary dia mamorona toerana feno toe-po.
Ny marbra tsy ara-dalàna dia feno kilasy avo lenta, ary ny hamafin'ny vato dia mifanentana amin'ny hakanton'ny tontolo iainana anatiny. Ny fahatsapana sy ny fahaiza-mandanjalanja dia mifandona amin'ny fahitana, mampiseho hatsaran-tarehy mifanohitra amin'ny taona sy ny maoderina. Momba ny marbra tsy ara-dalàna, kitiho eto raha hianaranao: Inona ny marbra misy rano?
Ireo feo mainty miseho amin'ny faritra kely amin'ny habakabaka dia manome fahatsapana ny fandinihana sy fitoniana. Haingo ambany ambany tsy misy famoahana sosona, ka mangina sy malefaka kokoa ny toetr'andro, mora mamela ny olona hiala sasatra.
Avy eo ambony latabatra ka hatrany amin'ny zorony, ny latabatra fisakafoana vita amin'ny marbra madio dia mitana ny laharan'ny famitana farany. Ny fametrahana zavakanto eo an-jorony dia vita amin'ny marbra ihany koa ho toy ny fotony. Ny toe-tsaina marefo amin'ny habakabaka dia mampitombo ny fahafaham-po amin'ny fahatsapana.
Ny vatan'ny marbra misokatra marbra dia tafiditra ao anaty kabinetra, mamaly ny famantarana ny habaka, ary ny fitaovana samihafa dia nozaraina mba hamoronana ireo sosona habakabaka.
Ny hatsaran-tarehy manjavozavo an'ny vera Changhong
Manohy ny fomba maoderina mifangaro mazava sy mazava, ny fampiasana fitaratra dia miteraka lamaody amin'ny habakabaka. Ity fitaovana maoderina fa tsy mavesatra ity no vatan'ny tontolon'ny famolavolana, miaraka amina singa metaly toy ny accents, mamorona toerana maoderina miloko nefa tsy mavesatra.
Ny vera Changhong no singa haingo manan-danja indrindra amin'ity tranga ity, ary ny vy tsy metaly miloko varahina dia mamaritra ny hatsarana manjavozavo. Momba ny Changhong Glass, kitiho eto raha te hahalala bebe kokoa: Inona ilay Changhong Glass?
Amin'ny fananganana ny habaka dia manaraka gadona maoderina sy voajanahary izy io. Ny fampiasana partitions fitaratra dia nohaingoina mba hampitomboana ny jiro voajanahary ao amin'ny habakabaka. Ny famolavolana zorony miolakolaka dia ahafahan'ny mponina mahatsapa ny fiononan'ny tsipika mavitrika amin'ny habakabaka.
Ny kabinetra mivelatra avy amin'ny rindrina dia samy manana ny fitafiany sy ny fanaka famolavolana, ary ny jiro fitaratra vita amin'ny sary dia mampiseho seho fiakanjo tononkalo.
Mifanaraka amin'ny feon'ny habakabaka, ny rindrina terrazzo ao amin'ny trano fandroana dia manana endrika tena tsara, ary ny lokony dia somary ambany nefa mampiseho tsiro miavaka. Ny fanamafisam-peo vita amin'ny alimo sy ny jiro fitaratra dia mamaritra ny toetran'ny kamo eo amin'ny habakabaka.
Previous :: Manokatra magazay Noodle, «Art Martial arts martial» Asa Vaovao Yiding Next: Inona ny loko simenitra?
2021 / 08 / 15 3721
2021 / 08 / 15 4589